KMF/CNoe : « Tsy fotoana hanitsiana lalàmpanorenana izao » | NewsMada
KMF/CNoe : « Tsy fotoana hanitsiana lalàmpanorenana izao »
Nivahiny tao amin’ny fandaharana “Ambarao”, radio Alliance 92 ny filoha nasionaly eo anivon’ny KMF/CNoe, Andriamalazaray Andoniaina. Voaresaka ny momba ny andraikitr’izy ireo, ny fifidianana ary koa ny lalàmpanorenana, mahabe resaka amin’izao fotoana izao. Ny ampahany amin’ny resadresaka…
Notsiahivin’ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe aloha fa anisan’ireo tsy nankasitraka ny nandaniana io lalàmpanorenana io izy ireo. “Nipetraka hatrany amin’ny toerany sy amin’ny lalan-tsaina mibaiko anay hatrany izahay… Vao lany anefa ny mpitondra, nitondra sosokevitra izahay ny hanamboarana io lalàna fototra io, saingy tsy natao… Resy lahatra izahay fa mila amboarina io. Tsy resy lahatra kosa amin’ny fotoana hanaovana izany satria any amin’ny taona 2019 vao hikarakara fifidianana filoham-pirenena isika raha hirosoana izany”, hoy izy. Nanteriny fa anisan’ireo nanao fanambarana miaraka amin’ireo fiarahamonim-pirenena koa ny KMF/CNoe ny amin’ny filazana fa hampidi-doza ny fikitihana ny lalàmpanorenana. “Mandinika ny tontolom-piarahamonina sy manara-maso ny fiainam-pirenena izahay ka mahita fa hiteraka savorovo ny fikitihana azy io. Mila misokatra sy mandinika isika. Mahatsara ny fiarahamonintsika ny tsy fanitsiana azy io…”, hoy ny KMF/Cnoe. Momba ny ny elenalem-potoana eo amin’ny hanaovana ny fifidianana fihodinana voalohany sy faharoa, nambaran’ny mpitondra fa anisan’ny tokony hovana, nambaran’ Andriamalazaray Andoniaina fa tsy misy afaka haminany na hisy na tsia ny fihodinana faharoa. “Raha ekena indray ary fa marobe ny kandidà ka hisy ny fihodinana faharoa, efa tao anatin’ny lalàmpanorenana ny taona 1992, ny 1998, ny 2007 ary ny 2010 io And 47 io. Efa teo hatrany io elanelam-potoana voalazan’ny lalàmpanorenana io ary tsy nisy nanakiana sady tsy nisy nanana olana…”, hoy izy.
Manambany ny Ceni filoham-pirenena
Nohitsiny, araka izany, fa tsy mitombina ary tsy mety ny tohan-kevitry ny filoha satria lasa manambany ny Ceni ny fomba firesany. “Tsy tokony hifanambany ny samy mpitantana… Tonga koa ny lalàmpanorenan’ny taona 2010. Nikarakara ny fifidianana nahalany ny filoha ankehitriny ny Ceni. Androany anefa izany, miteny ny filoha fa tsy mety ny fifidianana nokarakarain’ny eny Alarobia”, hoy ny KMF/CNoe. Nambarany fa mety ho tolokevitra vonjimaika avy amin’ny mpanolotsain’ny filoha io resaka lalàmpanorenana io satria tsy natsidiky ny praiminisitra ny And 46 nefa any amin’ny And 47 ny resaky ny filoha. “Tsy mitovy eo ny hevitra ary misy fiantrakany any amin’ny vahoaka sy ny mpifidy izany satria mampiroaroa saina ny maro ny ataon’ny mpitondra. Tokony hazava ny resaky ny mpitondra”, hoy ihany izy ireo.
Ankoatra izany, nitondran’ny KMF/CNoe fanazavana ny lalàm-pifidianana ary efa nitondran’izy ireo tolokevitra na fanakianana. Noraisiny ho ohatra fa 400 Ar ny vidin’ny kara-pifidianana ny taona 2006. Mety ho 1 000 Ar izany izao. Ampitomboina amin’ny mpifidy mihoatra ny 10 tapitrisa izany. Vola very anefa satria afaka mifidy ny olona na tsy misy kara-pifidianana rehefa anaty lisi-pifidianana ary manana kara-panondro. Tokony hatsaraina izany, araka ny nambarany. Teboka hafa nitondran’izy ireo tolokevitra ny momba fanavaozana lisi- pifidianana. Mifarana ny 15 avrily ny famaranana tena izy ny lisitra. Ahoana ny fomba hijerena ny olona tsy maintsy mifindra monina aorian’io daty io. Tsy afaka mifidy izany izy… Eo koa ireo tsy ampy taona, ny 15 avrily nefa feno 18 taona ny 16 avrily. Tsy afaka mifidy koa rehefa tonga ny fifidianana. Eo koa ny lalàna hifehezana ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, tokony hojerena. Manampy izany ny lalàna mifehy ny famatsiam-bolan’ny antoko politika. “Tsy hahita ny tonga lafatra isika, saingy hatsaraina hatrany. Tsy midika hatao fialantsiny anefa rehefa misy zavatra tsy mahomby na hialokaloka amin’ny tsy tonga lafatra. Ohatra, tsy azo ekena ny anarana miverimberina. Midika ireny fa tsy alehany ny mpikarakara fifidianana ka tsy azo leferina izany”, hoy izy.
Atahorana ny hoavin’ny firenena
Anisan’ny nandray anjara tamin’ny famolavolana ny lalàm-pifidianana rahateo ny KMF/CNoe ary efa any amin’ny governemanta izany ka miandry ny tohiny izy ireo.
Etsy andaniny, manentana ny olom-pirenena hatrany ny KMF/CNoe ary miezaka manazava fa tsy ratsy akory ny fanaovana politika. “Misy anefa ireo manondrana ka mitarika ny olona ho diso fanantenana ary zary leom-boanana. Mitady hizotra amin’izany isika raha tsy misy fomba fanao hamboarina haingana. Manao fanadihadiana izahay ary mitondra tolokevitra ho an’ny mpitondra satria raha tsy mitandrina isika, atahorana ny hoavin’ny firenena…”, hoy izy ireo.
Tsiahivina fa manentana ny olom-pirenena, hijery ny anarany sy ny momba azy rehetra any anaty lisim-pifidianana izao ny eo anivon’ny KMF/CNoe satria anisan’ny varavarana iray anisan’ny tsy mampanjary ny fifidianana izany.